UNkonyeni ugezeke igilo ngamaphoyisa esifazane KwaZulu-Natal – Sivubela intuthuko Newspaper
AMAPHOYISA esifazane emikhakha ehlukene ezibambele kwisivimbamzila.
UNKK Neliswa Peggy Nkonyeni ophathiswe uMnyango wezokuThutha, ezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal uchome uphaphe legwalagwala amaphoyisa esifazane kulesi sifundazwe ngeqhaza alibambile ekuletheni inhlalakahle kubantu abasakhele.
UNkk Nkonyeni uhlanganyele namakhulukhulu alaba besifazane abangamaphoyisa kwisivimbamgwaqo ebesiseMariannhill Toll Plaza ebesihlanganyelwe yilamaphoyisa abeqhamuka ephikweni lwe-Road Traffic Inspectorate (RTI), iDurban Metro Police nolwe-South African Police Service (Saps) ezokhombisa ubukhona bawo njengoba iNingizimu Afrika beyibungaza usuku lwembokodo (Women’s Day) oluba njalo mhlaka 9 ku-August ngokwekhalenda laleli lizwe.
Ekhuluma lapha uNkk Nkonyeni utuse ubuhlakani bokuqaphela kwamaphoyisa esifazane uma eqhathaniswa nawesilisa ikakhulukazi uma kwenziwa umsebenzi. Kulesi sivimbamzila kupeqululwe izimoto eziwu-500 ezinye zazo ezitholakale zikwabanye abantu ngokungemthetho okuvele ukuthi zantshontshwa ngo-2015 ezingxenyezni zesifundazwe saKwaZulu-Natal ikakhulukazi emalokishini akhele iTheku noMgungundlovu. Lapha bekuqinisekiswa ukuthi zonke izimoto zikulungele ukuba semgaqweni nokuthi kubhekwe ukuthi abashayeli bayahambisana yini nemibandela yokunqanda ukubhebhetheka ngamandla kwe-Covid 19 edla silaza nafumuka kuleminyaka emibili.
UNkk Nkonyeni enika umdlandla abesifazane abasendimeni yezokuphepha uthe bangagudluki emsebenzini wabo omqoka abawenzela isizwe. “Sesisungule uhlaka lapho esizobe sibheka khona iqhaza lamaphoyisa esifazane nokuwaveza ukuthi abonwe yizwe ukuthi nawo aqotho emsebenzini wawo futhi awenza ngokuthenbeka njengoba enesiphiwo sokuqaphela. Lokho singekungabaze ukuthi amaphoyisa esifazane aqaphela kakhulu futhi ayaqikelela ngaso sonke isikhathi uma enza umsebenzi wawo,” kusho yena.
Ephetha uNkk Nkonyeni uthe kunezigcawu azihlalayo nabakhulu bomnyango awuphathisiweyo lapho bezama ukuthola izixazululo ezinkingeni ezikhungatha i-Road Traffic Inspectorate esifundazweni saKwaZulu-Natal. Uthe bafuna ukuphuthumisa ukuvalwa kwezikhala zemisebenzi yezikhulu emnyangweni wakhe futhi ukhuthaza abesifazane ukungena kuzona. Uthe baphezu kwazo izikhalo zomphakathi ezingena ehhovisini lakhe ezingakaze kuhlangatshenzwane nazo.
UZikalala nethemba lokuvuka komnotho waKwaZulu-Natal emuva kwezibhelu